IIMBONO EZINGAMA-40 ZOYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA (IMIFANEKISO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iimbono ezingama-40 zoyilo lwegumbi lokuhlambela (Imifanekiso)
Iimbono ezingama-40 zoyilo lwegumbi lokuhlambela (Imifanekiso)
Le galari inemibono yoyilo lwangoku lokuhlambela. Jonga le mifanekiso intle yanamhlanje yokuhlambela ukuze uncede uthathe isigqibo sokuba zeziphi iikhabhathi ezingenamsebenzi, izibane, iisinki, iifompo, kunye nezixhobo ezifanelekileyo ekhaya lakho. Ukusuka kwi-minimalist, ukuya kwikamva kukho uyilo lwegumbi lokuhlambela sinethemba lokuba uyokonwabela.
Igumbi lokuhlambela lale mihla likulo mfanekiso ungentla lizisa ukukhanya okuninzi kunye neefoto zomfanekiso opheleleyo ziishawari nebhafu. Ithayile ye-porcelain egqityiweyo eyenziwe ngomthi isetyenziselwa umgangatho kunye neendonga, kwaye igcotyiwe yindawo enepateni phambi kwetheyibhile enkulu yelavatory, enezipili ezintathu ezingento yanto. Umbala wombala uziswa kwimibala engathathi hlangothi ngokusebenzisa i-aqua blue mosaic tile kwishawari.
Iingcamango zangasese zangoku
Imifanekiso yamaGumbi okuhlambela anamhlanje
Amagumbi okuhlambela anamhlanje aneTayile kaMoses
Igumbi lokuhlambela lale mihla elinebhafu yangaphandle
Amagumbi okuhlambela anamhlanje abonisa zombini isitayile kunye nokusebenza ngelixa uziqhelanisa nezinto zangoku zoyilo lwangaphakathi. Iimpawu eziqhelekileyo kule mihla Uyilo lokuhlambela kubandakanya ukusetyenziswa okuncinci kombala, ukunamathela kwinto engathathi hlangothi, emnyama nomhlophe, kwaye emva koko ukongeza into egxininisayo. Izinto zeAccent zinokuqaqamba, imibala eqinileyo, ukuzisa ukuva okwangexesha elizayo okanye ukuva kwexesha elizayo. Izinto ezichazayo zinokunxulumana ngakumbi nokugqitywa kwendalo okunje ngamatye okanye ukhuni. Ukugqitywa kwesinyithi kweepompo kunye nokufakwa, ngakumbi ngentsimbi engenasici okanye i-chrome kuqhelekile nakwizindlu zangasese zangoku.
Imiphezulu yeetafile zamatye ezinomsebenzi osebenzayo Ukutshata zombini isitayile kunye nomsebenzi, isiseko semeko yezi zinto imiphezulu yeetafile yokuhlambela zihlala zifakwe iikhabhathi ezininzi, iishelfu kunye neerowuli. Ngaphandle kokuvumela indawo yokugcina engaphezulu, ezi zinto zecala zifihla izifudumezi ezincinci zamanzi, imigibe ye-P, imigibe yeebhotile neminye imigca yemibhobho engathandekiyo.
Ukongeza, uninzi lwamacwecwe ezindlu zangasese axhonyiweyo, eshiya umsantsa phantsi kwawo. Olu lukhetho lwe-ergonomic, oluvumela abasebenzisi ukuba beme nkqo phezu kwetafile ngeenyawo zabo ezibekwe kamnandi phantsi kolwakhiwo. Ukongeza, oku kuvumela ukucocwa ngokulula kwemimandla emanzi, ngakumbi kuba iikhabhathi zihlala zenziwe nge-laminate kwiplanga laselwandle okanye kwibhodi ye-MDF, enokuthi ibe sengozini yokulwa nokudibana namanzi kunye neekhemikhali zokucoca.
Hlamba izitya -Ngokusa kwemiphezulu yeetafile ezakhelweyo zokuhlambela zanamhlanje, izitya zokuhlambela zithatha iiprofayili ezinesibindi kunye nezihle. Ngokwesiqhelo kwi-porcelain emhlophe, izindlu zangasese eziphambili ziya kuba nesibini sezitya zokuhlambela okanye iyunithi enye enezitya ezimbini ezahlukileyo kunye neepompo. Uhlobo lomkhumbi okanye izitya zokuhlambela ezikwi-counter zikwindawo ye-vogue, njengoko oku kuthetha indawo ethe kratya kwaye kuthintela izinto eziwela esinkini.
Izindlu zangasese -Zenziwe ikakhulu ezimhlophe, ezinye izindlu zangasese zibonisa uyilo lwetanki olufihliweyo, apho itanki lamanzi lifihlwe ngasemva kodonga olwakhiwe lwekhonkrithi eligutyungelwe ngetayile.
Niches - Itanki engabonakaliyo kwindlu yangasese ifihliwe, kwaye umda emva kwendlu yangasese uyenziwe, enye indawo esebenzayo ethandwayo kwiindawo ezininzi zangasese zangoku. Ezi zinto zakhiweyo zinokwakhiwa yonke indlela ukuya kufikelela eluphahleni, kunye nezikwere ezincinci zesikwere ezibethelelwe eludongeni ukuze kwenziwe ishelfu yokuhombisa. Ukuba nesibane esincinci kwindawo nganye ekwayindlela entle yokunxiba indawo.
Iipili -Izibuko ezininzi zizele ngokugqibeleleyo, oko kuthetha ukuba igubungela bonke ububanzi bodonga ukusuka esiphelweni kuye esiphelweni, ukuvumela ukuqhubeka ngakumbi ekusebenzeni kwayo, kunye nembonakalo yangoku ehlaziyiweyo.
IWindows - Nangona i-taboo ecacileyo ngaphambili, inendawo enkulu, emgangathweni ukuya eluphahleni iifestile zeglasi kwigumbi lokuhlambela ithandwa phakathi kwezindlu zangasese zangoku. Olunye unyango olusetyenziselwa ukuqinisekisa ubumfihlo ngeglasi enqabileyo okanye ukwenziwa kwegadi yangasese yangasese ecaleni kwewindow yokuhlambela. I-Skylights zikwayindlela entle yokuzisa ukukhanya kwemini ngelixa ukhusela abasebenzisi babucala.
Indawo yangaphandle - Amagumbi okuhlambela amakhulu anokukhetha ukuba nendawo yangaphandle, ihlala ibhafu okanye indawo yokuhlamba. Nangona usondela ngakumbi kuyilo lwe-rustic, eli nqaku liyathandwa kumagumbi okuhlambela anamhlanje ngesi sizukulwana sinqwenela ukuba kufutshane nendalo kunye nomnqweno weendawo zendalo ezingakumbi.
Iibhafu - Iibhafu zinokuba ziiyunithi ezizimeleyo ezikumgangatho ophakamileyo, okanye iibhafu ezivalelweyo ezineeprofayili ezilungele ngakumbi uyilo lwangoku lokuhlambela. Iindawo ezakhiweyo kunye nebhafu yokuhlanjwa esetyenzisiweyo isasetyenziswa, kodwa ngetayile eyahlukileyo yolwakhiwo. Iiyunithi eziphakanyiswe phantsi zikhethwa ngenxa yeemilo ezizodwa ezenziwe ngabaqulunqi bokuhlambela ekusebenziseni i-porcelain okanye i-resin kwiibhubhu zabo. Ezinye iibhubhu zenziwe ngezinto ezilula, zivumela iziseko zenyawo ezinamacala. Bona apha ngaphezulu indlela yokukhetha ibhafu .
Imibhobho yamanzi ebhafini -Ngenxa yokuthandwa kwendawo yokuhlambela ebekwe emgangathweni, iimpompo zeetabhu ziye zatshintsha, zaba ziiyunithi ezonyuswe ngomgangatho. Ngokwesiqhelo ezi zinto zityatyekwe nge-chrome ziqala ngesitya esisezantsi emgangathweni size phezulu kumphezulu webhafu entanyeni ende. Iimodeli ezisebenzayo ngakumbi zibonisa ishawari yomnxeba kunye nomnini.
Indawo yokuhlamba - Ngesiqhelo ume-up iishawari zivalwe ngeepaneli zeglasi ezinezilinganisi zesinyithi ezingenanto ukuze kuthintelwe amanzi angene kwigumbi lokuhlambela. Ngaphandle kokutshintshwa kwekhethini yeshawari engasasebenziyo, intloko yeshawari efakelweyo iphinde yaphuculwa yaza yafakwa ishawa, ukuze isebenze lula. I-shower-shower eqhutywe kwisilingi okanye phezulu phezulu eludongeni yinto ekhethiweyo, kunye nabantu abaninzi befanisa amava kunye nokuhlamba emvula okanye phantsi kwempompo encinci.
Iithayile ezingaqhelekanga -Nangona iithayile zisenza esona sigqibo siphambili samagumbi okuhlambela ngenxa yokungangenwa kwawo ngamanzi kunye nendleko ezingabizi kakhulu, ngakumbi nangakumbi isibindi sobume kunye nokugqitywa kwenzelwe. Iithayile zikaMoses, iithayile ezisikiweyo ze-chevron, iithayile zokwahlulahlula kunye neetreyini zendlela ehamba ngaphantsi komhlaba ziiprofayili ezithandwayo, ngelixa ezinye iindawo zale mihla zibandakanya ukulinganisa imabhile, igranite, ukhuni kunye neglasi.
Ukukhanya kwezivakalisi -Ngaphandle kokuba neesccesces zodonga njengokukhanyisa umsebenzi ngokuthe ngqo ngaphezulu kweetafile zokuhlambela, ezinye izindlu zokuhlambela ezinkulu zide zikhethe ukongeza isibane esinye esikhulu kwi-bathtub, esenza incoko kunye niche. Le ndlela intsha yoyilo ibumba igumbi lokuhlambela lingaphezulu nje kwendawo yokucoceka, kodwa indawo yokuphumla, ucinge, kwaye mhlawumbi udibane nabanye.
Ifestile encinci yomgangatho kunye nokukhanya kwesibhakabhaka kuzisa ngaphandle kule ndawo yokuhlambela emhlophe emhlophe, equkethe i-beige yamatye emgangathweni kunye neendonga ezimhlophe ezenziwe ngetayile. Ibhafu yokuhlambela enobukrelekrele ibekwe kwikona ngelixa iglasi ivaliwe ishawa ebutofotofo Indawo enebhentshi ehleliyo, izixhobo zentsimbi engenasici inendawo ende ezaliswe ngomatshini wokuhlambela umnxeba kunye nentloko yeshawa.
Le ndlu yangasese inenkqubela yoyilo lwangoku lwe-luxe olubhangiswe ngezinto zakudala. Iprofayile yebhafini kunye ne-backwall ene-niches ezintathu ezikhanyisiweyo zikhangeleka zanamhlanje, kodwa zinikwa i-classic twist ngokusebenzisa i-drum chandelier exhomekeke ngaphezu kwayo. Iipati zokuphamba ezingenanto ukuya kwicala zingezinto zangoku ngokwemiqathango yokuhlamba isitya kunye nesipili, kodwa izixhobo zokubala ezenziwe ngokhuni ezinikezela nge-antique zinika indawo indawo yokuziva yakudala. Indawo yeshawari kumatye agangathiweyo agqityiweyo kumgangatho kunye neendonga zemibala eluhlaza okwesibhakabhaka ifihliwe ngokufihlakeleyo emva kodonga oluqinileyo olungwevu.
Le ndlu yangoku yesitayile yokuhlambela inezinto ezininzi zamatye kunye neenkuni, eziqala ngendawo yokuhlambela ebonisa iphepha lodonga, i-travertine yelitye elimile okweqanda kunye nelitye lomlambo. Umgangatho wonke usemthini ofudumeleyo wobunjineli, ukwabonakaliswa kwizivalo kunye nakwimeko yamatyala esetyenziselwa ikhawuntala elingenaxabiso. Ikhawuntari yokulwa ilize nayo ikwi-travertine engagqitywanga, kwaye ihlala phambi kweebhodi zodonga lwenqanawa ezipeyintwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Amampunge anamhlanje anendawo yokuhlambela eyakhelweyo kunye nokugqitywa kweengqalutye njengesiseko sayo, kwaye ijikelezwe ziithayile eziluhlaza. Isibane sepinecone-esque acrylic pendant hang phezulu kwebhafini kwaye sizisa i-quirk ethile kwigumbi lokuhlambela elingaphantsi, njengelaminates emnyama eyenziwe ngomthi esetyenziselwa ikhabhathi, ehambelana nezibambo ezigqityiweyo ze-chrome. Inkuni ikwasetyenziselwa ukutyibilika phantsi, ngelixa i-countertop ye-vanity ibonisa i-quartz engwevu engwevu.
Le miniistist yanamhlanje Uyilo olumhlophe lokuhlambela ifaka iipopu zeorenji, ziboniswe kwiskimu sombala esisetyenziswe kwigumbi lokulala. Indawo ephambili ekugxilwe kuyo yibhafu yokuhlambela eluxande iphakanyiswe kwiqonga elincinci elinamatye amhlophe omlambo. Ibhafu yenziwe ngethayile emhlophe emhlophe kunye nophahla lomthi omnyama, kwaye igqityiwe nge-chandelier yesimanje, i-TV ekhwele iflethi yesikrini, kunye nefestile ekhanyayo yokukhanya kwemini. Eminye imigangatho inomgangatho weethayile emhlophe ecacileyo.
Le ndlu yokuhlambela imhlophe inikezelwa ngokukhaphukhaphu ngenxa yokukhanya komtya kuyo yonke imigca yegumbi. Esi siphumo sinika isilingi imvakalelo yokungakhathali okuxeliswa kukuphamba okude kwento engenamsebenzi kwi-quartz emhlophe. Ngesipili kunye neebhafu zokuhlambela, i-countertop ye-vanity nayo ibonisa ishelufu yokulenga kwi-laminate ekhanyayo, eyongeza ukufudumala kwindawo emhlophe. Umbala wejometri ongwevu wombhoxo okhokelela ebhafini ukongeza ubume kwindawo yokuhlambela emhlophe emhlophe yonke.
Igumbi lokuhlambela elimnyama nelomhlophe libonisa imida yethayile kwipateni yebhodi yokujonga esebenza kwimigca ethe nkqo ecaleni kwamacandelo eendonga zayo. Phakathi kwale mida kukho i-matte engwevu ye-porcelain tile ehambelana ne-browner, iithayile ezincinci ze-porcelain ezisetyenziselwa imigangatho. Ibhafu enkulu egobileyo ehleli ngaphesheya kwesitya esikhulu sokuhlambela ezimbini ezibekwe kwilize elingenamakhonkco engwevu nakwitafile yamatye emnyama. Icala elikude kwigumbi lokuhlambela likwanesinxibo esincinci, kunye nezipili ezibiyelweyo kunye nesibane sodonga esineentloko ezintathu.
Igumbi lokuhlambela lendlela yale mihla linemigca ecocekileyo, ecocekileyo, eqala ngebhafu yokuhlambela engunxantathu enomatshini wombhobho ophakamileyo. Indawo enkulu yokuhlambela ngeglasi enesitshizi esibonisa isibhakabhaka esibekwe eluphahleni nakwishawa yefowuni. Ukuya esiphelweni, ikhawuntari yento engento ishiyeke eludongeni, inika umbono wobudlelwane obusondeleyo. Ikhawuntari yokulwa into engento inesipili esikhulu sodonga, izibuko ezibekwe eludongeni kunye nekhabhathi emhlophe engenamthungo kwisiseko sayo. Igumbi lokuhlambela elimhlophe lidityaniswa ngumgangatho omdaka we-porcelain kunye ne-chandelier yesilivere ngaphezulu kwebhafu isebenza njengeyona ndawo kugxilwe kuyo.
Uyilo lwangoku lokuhlambela oluncinci lwe-monochrome luqala ngombhobho we-resin emile okweqanda ecaleni, obekwe phambi kweefestile zemifanekiso ujonge eyadini. Umda weCarlara marble mosaic tiles, ukusika okukhulu kwelitye kukhokelela kudonga lokugqibela, luhonjiswe ngetreyini engwevu, nesipili esipheleleyo esibonisa iziko laso. Udonga lwangasemva lubonisa indlu yangasese emhlophe encinci, kwaye idityaniswe nesihlalo se-acrylic Ghost kunye netafile encinci yekofu. Iiparitha zokubala ezinamacala amade ukuya ecaleni zifakwe eludongeni ngesipili esiqhubekayo, kwaye zikhanyiswe zizibini ezibini zokukhanya okuphezulu kwezibane. Imilo yeefompu ikwabonisa uyilo lwangoku lomgama.
Igumbi lokuhlambela elimhlophe lonke libonisa isitayile esine-Neo-classical esineesilingi zayo, kunye nokupheliswa kombona kwendawo yokuhlambela ishawa kunye nendlu yangasese. Indawo yokuhlambela inomnyango weglasi, imvula kunye negrey marble tile kunye nodonga. Kwelinye icala, umnyango olula omhlophe ukhokelela kwindlu yangasese. Iziko lokuhlambela linemifanekiso yefestile ebheke ngaphandle, kwaye ibhafu emhlophe ejikelezileyo ihleli kanye phambi kwembono. Kwicala le-tub kukho i-arched niche esebenza njengendawo yokugcina izinto kunye nokulinganisa ifestile ye-arched, kwaye ubhedu kunye nekristale chandelier isebenza njengeyona ndawo iphambili ekugxilwe kuyo.
Igumbi lokuhlambela lale mihla linendawo ekuthiwa yi-Carrara marble countertop enesiseko esimnyama somthi esibunjiweyo. Ukubandakanya izitya ezimbini zokuhlambela ezineefompo ezifakwe eludongeni, into engento iphela kwifestile yokucoca kunye nesibane sodonga esineesangqa ezikhanyisiweyo. Zonke ezinye izindlu zangasese zihonjiswe ngemayile emnyama namhlophe emhlophe, ngelixa indawo yokuhlambela iza kugqitywa ngamatye amnyama aqine ngemithambo emhlophe. Indawo yeshawari yahlulwe ngeepaneli zeglasi kunye neempawu zemvula ezinesikwere.
Igumbi lokuhlambela lale mihla linodonga olufudumeleyo lweplanga kunye nefestile enkulu yomfanekiso ngasemva. Iithayile zamatye ezingwevu zikwalayini zodonga lwazo, xa kuthelekiswa neethayile ezimhlophe ze-porcelain zomgangatho. Indawo esembindini yindawo yokuhambisa eyakhelwe phezulu eqongeni eyenziwe ngethayile engwevu, enesiphatho segolide esine-motif chandelier.
Iithayile zamatye ezimdaka ngebala ezihamba ecaleni kwale ndlu yokuhlambela yanamhlanje kunye nemigangatho. Ukwahlula-hlula kweglasi okwahlula lonke igumbi lokuhlambela kwibhafu emhlophe ene-boxy eneefompu ezigqityiweyo zodonga. Ipaseji emxinwa ekhokelela kwigumbi lokulala eliphambili kunye neempawu ezincinci zepeyinti ezimnyama ezenziwe ngeekhabhathi zokugcina.
Igumbi lokuhlambela lale mihla linetayile emhlophe eyenziwe ngomthi esetyenziselwa imigangatho yayo kunye nokufikelela kwindawo enamacala amathandathu eneseti yeefestile ezintathu ezixhonywe kabini ezinemibala emhlophe yokuqengqeleka ebhafini emhlophe egobileyo. Indawo yeglasi evalwe ngeglasi eneentsimbi ezingenanto ezingenanto zinikwa ithayile emnyama ngodonga lwayo lwangasemva, umahluko omkhulu kwiindonga ezinombala we-beige kunye nophahla olumhlophe. Indawo yokuhlambela ineshawa kunye nemvula.
Ukujongwa kwendawo enehlathi yifestile enkulu enefreyimu yale ndawo yokuhlambela yanamhlanje. Isetyhula ibhafu emhlophe ehleli phambi kwale festile kwaye ithe ngqo kumgangatho wetayile emdaka. Ikhawuntari ye-vanity ifaka iikhabhathi zomthi omnyama eziphela kwindawo ekumgangatho weequartz emhlophe. Isibuko esipheleleyo esigcweleyo sikwenziwe ngobhedu lwe-antique kunye neglasi eludongeni sconce.
Ingubo yegoliyoni emile kakuhle ukukhanya kwendlu yangasese ijinga phezu kwebhafu emhlophe ecoliweyo ecaleni kwefestile enkulu enombono wegadi. Iithayile zamatye amnyama zegranite zihamba kule ndawo yangasese yangoku kwaye ziye kwi-counter ye-vanity ekugqibeleni enefestile ezimbini ezimanzi ezimileyo. Kwicala kukho isitopu sokuhlambela esine-laminate efanayo emnyama eyenziwe ngamampunge kunye neetafile zamatye amhlophe, kwaye ijonge esipilini esikhulu esipheleleyo esibekwe ngesitayile sodonga.
Iindonga zelimestone ezingwevu ezinemithambo ethambileyo egudle udonga kunye nomgangatho wale ndawo yokuhlambela yanamhlanje. Ibhafu imhlophe, yoxande kwaye igqityiwe kulwakhiwo lwethayile engwevu engwevu. Kwicala, indawo yokuhlambela ine-niche yodonga, ishawa yomnxeba kunye neshawari yemvula, kwaye inendawo yomgangatho wethayile. Umva wesipili esikhulu kwinto engento ikwanombala ocwebezelayo omdaka ngombala ongwevu, kwaye isitya sokuhlambela sihleli kwitafile yamatye emnyama ebanjwe ziikhabhathi zomthi ezimnyama ezomeleleyo kunye neetreyini ezinemigca emide egqitywe nge chrome.
Le ndlu yangasese yangoku inezinto ezenziwe ngerabhile emgangathweni. Indawo yokuhlamba iglasi-ifakwe ngaphakathi kwicala kwaye ineempawu zethayile enemibala yesanti kwimigangatho yayo kunye nethayile emgceni ongwevu ongwevu yomda apho kulungiswa khona ishawa. Enye indawo yeshawari yeyona nto iphambili, isetiweyo ngaphandle nangaphandle ngenjongo yentlango ngaphandle. Ukugqitywa kwelitye eliqingqiweyo kusetyenziselwa udonga lwangasemva kunye nokulungiswa komhlaba kukwasetyenziselwa ukujikeleza. Buyela ngaphakathi, iithayile zemarmarra zeCarrara zipheliswa kwi-winscot ngasemva kwebhafu emhlophe eyenziwe ngeqanda emhlophe enombhobho ogqityiweyo we-chrome ogqityiweyo.
ukuba uthini kwikhadi lomtshato
Izibane ze-Retro ezimnyama zangoku ezimnyama ezinengaphakathi legolide zixhomekeke ngaphezulu kwebhafu yokuhlambela emhlophe enezinto ezilungiselelwe umgangatho. Umabonakude wescreen seflati ubekwe kudonga lwe-beige ecaleni kwebhafu kwaye ikufutshane nendawo yeeshawa efakwe kwiglasi ebonisa iithayile zomnquma oluhlaza ongaphantsi kunye nokugqitywa kwelitye lemabhile elimhlophe nelimhlophe. Igumbi lokuhlambela lonke liqokelelwa ndawonye ngombala wegrey slate kumgangatho osikiweyo kwaye ubekwe ngendlela engaqhelekanga.
Eli gumbi lokuhlambela lanamhlanje linikezela ngeyona mbono mihle yesixeko, kwaye ngaphakathi kwayo kuxelisa ulungelelwaniso lwezakhiwo ezingaphandle. Ukujongana nefestile enkulu yemifanekiso yibhafu emhlophe, efakwe kwilitye elimnyama elakhiweyo. Zonke ezinye iindonga zibonisa eli litye lingwevu ngelixa imigangatho ikwi-tile yelitye emhlophe ekhanyayo. Ikhawuntari yokulwa into engento inesibuko esipheleleyo esigcweleyo sombane kunye nezinto zangoku ezixhonywe eludongeni kunye nokusebenzela isitopu sokukhanya esimde sokukhanya esinamatye amdaka. Ukugqitywa kweenkuni ezimnyama kusetyenziselwa ikhabhathi yokugcina ecaleni kwento engento.
Iindawo zokuhlambela ezinkulu zangoku ze-luxe ezijikeleze i-alcove egobile yendawo yeglasi evaliweyo. Indawo yokuhlamba ibonisa i-tile emhlophe emhlophe ehamba kunye neendonga zayo kunye nokugxila kwi-tile yomdumba omnyama kunye neefestile ezintathu zokucoca ngasentla. Indawo eseleyo kwigumbi lokuhlambela ikumgangatho wethayile wamatye angwevu kunye neendonga ezimhlophe, ngaphandle kwekhawuntara yokuhlambela enebhulethi emhlophe eyenziwe ngethayile yomthi kunye nodonga olungqongqo lwethayile. I-countertop yamatye e-travertine ifakwe kwisiseko somthi omnyama kwaye ixhasa isitya esimhlophe sokuhlamba. Kwelinye icala yisipili eludongeni lonke phambi kwetafile encinci yokunxiba kunye nosihlalo.
Isitulo sokuphumla esimhlophe esinengubo emhlophe sihleli ngakwifestile yomsitho kunye neengcango zeglasi ezijingayo zale ndawo yangasese yanamhlanje. Ukukhanya okungakumbi kuziswa kwigumbi lokuhlambela kusetyenziswa isibane salo esibengezelelweyo esibonisa ukukhanya komgangatho weplanga. I-alcove evalelweyo efakwe zizibane zodonga icwangciselwe ngokukodwa ibhafu emhlophe egosogoso enesipili esikhulu ngaphezulu kwayo.
Le ndlu yangoku yangasese iphakanyisiwe ineebhafu yokuhombisa yasimahla kwaye ifakwe isibane esikhulu seglasi ecaleni kwendawo yeshawa. Indawo yonke yokuhlamba inezindonga zamatye omlambo kunye neetayile ezimhlophe eziicocekileyo. I-backwall yegumbi lokuhlambela inethayile eluhlaza okwesibhakabhaka emgceni, eboniswe kwisipili esipheleleyo sento engenanto ebonisa isitya sokuhlambela esingqonge isanti kunye nefayiti kwitafile emhlophe yequartz kunye neekhabhathi ezimhlophe.
Le ndlu yangoku ye-rustic yangasese inebhafu yokuma yasimahla eyenziwe ludonga lweetayile zegolide kunye nezibane ezibiyelwe nge-orb ezixhonywe ngaphezulu. Imigangatho ibekiwe iithayile zetavernine ezimile okwe dayimani kunye neenkcazo zethayile yelitye engwevu. Icala elikude lokuhlambela linendawo enesetyhula, apho iipleyiti zokuhlambela uhlobo lweenqanawa zibekwe kwitafile yomthi efudumeleyo. Ngaphambi kwesitya ngasinye kukho isipili eside, esimnyama esimnyama, kwaye phakathi kukho iifestile ezinkulu ezenziwe ngomthi.
Le ndlu yangasese emhlophe emhlophe yenziwe nokuba ikhanyise ngokukhanya okupholileyo okumhlophe okufakwe kwi-wainscoting ehamba ngeenxa zonke kule ndawo yokuhlambela. Ithayile esetyenzisiweyo lilitye lemabula leCarrara, kwaye ikwasetyenziswa njengesixhobo sokubuyela umva kunye nezinto ezinxamnye nezinto zokubala. Isibini setyhula lohlobo lwesitya sokuhlambela sihleli ngaphezulu kwale ndawo yokuphaka ilize, ngelixa indlu yangasese enetanki efihliweyo kunye nebhidet ime nkqo. Amakhethini amhlophe amhlophe angenisa ukukhanya okuqaqambileyo ngaphandle ngelixa ugcina ubumfihlo.
Le ndlu yangasese ibonakaliswe yitayile emnyama emhlophe nemhlophe esetyenziswe njengemva kwendawo yeshawari eyakhelweyo nasemva kwesipili esikhulu sangemva. Iindonga, ibhafu eyakhiweyo kunye ne-countertop yale ndawo yokuhlambela zikwi-tile ye-travertine yelitye elikhanyayo. Isitya sokuhlambela sitshone sotshona kwindawo yokuphamba ngokugcwala kancinci kweprofayili ukusuka kumda wekhawuntara. Izinto ezigqityiweyo zodonga ezigqityiweyo zodonga zixhonywe eludongeni lwethayile emnyama kunye nomhlophe.
umculo womtshato iingoma zomtshato
Le ndlu yokuhlambela iseluphahleni emhlophe egangathiweyo emhlophe kunye ne-chrome egqityiweyo ngetawuli heater ngokungafaniyo kakuhle neethayile zamatye ezimdaka ngombala ezimdaka ezisetyenziselwa udonga kunye nemigangatho yale ndawo yangasese yanamhlanje. Ngasemva kwendlu yokuhlambela ebiyelwe eludongeni kunye ne-bidet yindawo encinci evalelweyo kwiimfuno zangasese kwaye ngaphesheya kwayo yindawo yeglasi evaliweyo eneefowuni kunye nentloko yeshawari ejikelezayo.
Le ndawo yangoku yeRustic igumbi lokuhlambela eludongeni olubomvu olubonakaliswe ngodonga olukhulu oluxhonywe kabini, olwahluke ngothayile wamatye amnyama omnyama osetyenziselwa imigangatho kunye nodonga. Ibhafu yentsimbi emhlophe emhlophe epeyinti ehleli phambi kwesipili esikhulu, somthi esifakwe kwisipili esime ngendlela engaqhelekanga. Iphethini yejometri e-quirky kwiitawuli zongeza kwi-rustic charm yale mihla yokugezela.
Iindawo zokuhlambela zanamhlanje eludongeni lwangasemva ezinemodeli entle yeethayile zaseSpain kwiimilo zejometri kunye neepateni. Indawo yokuhlambela eseleyo isebenzisa itayile emdaka ngamatye ezindongeni kunye nebhafu eyakhiweyo kunye nomthunzi okhanyayo wetayile enye kwimigangatho. Isitya sokuhlambela esineenqanawa sihleli phambi kwesipili esibuyiselwe umva kwaye sixhaswa ngumthi weenkuni ngomthi ophethe igolide. Imifanekiso eqingqiweyo yegolide evuselelweyo esecaleni ikwagcwalisa iithoni zentsimbi yezeveni.
Ithayile yomzekelo webhodi yokukhangela ebhodini isetyenziselwa indawo yokuhlamba kunye nodonga lwangasemva lwento yokulwa. Indawo yokuhlambela iglasi efakwe ngaphakathi kwaye inefestile engaphandle kunye neshawa yefowuni. Ikhawuntari yelize ngakwelinye icala inezitya ezinkulu zokuhlamba i-boxy ezitshone kwitafile emhlophe ye-quartz eneekhabhathi ezimhlophe ezenziwe ngomthi. Iithayile zomgangatho zilula iithayile zeceramic emhlophe.
Le ndlu yokuhlambela yesitayela sikaMarie Antoinette inesibuko esikhulu esibekwe phezu kwetafile emhlophe yequartz enezitya zokuhlambela. Iikhabhathi ezingamampunge zokungabinanto nazo zikwisiphelo sesipili esixhonyiweyo kwaye inyuselwe eludongeni ngephepha lodonga le-beige kunye nemibala emhlophe. Ibhentshi emnandi ime phambi kwefestile enkulu emhlophe emhlophe kunye ne-beige drapes enzima, kwaye iyaqhubeka ne-luxe vibe yakudala. Iithayile zomgangatho ophezulu ze-porcelain ezilula zigqiba umxholo weklasiki.
Iifestile ezimbini ezinkulu zemifanekiso yale ndawo yokuhlambela yale mihla zizisa ukukhanya, kwaye yenziwa yakhanya nangaphezulu ngophahla olukhanyisiweyo, apho ikhandlela yegolide ethe-ethe ijinga embindini wegumbi lokuhlambela. Imigangatho kunye neendonga zibonisa umahluko wokugqitywa kwamatye e-travertine, ngelixa udonga lwangasemva lukwiphepha lodonga legolide elinemibala emhlophe nepinki yeentyatyambo. Ibhafu setyhula yakhiwe ngetayile emnyama emnyama, ikwasetyenziselwa imiphezulu yeetafile, kwaye ihambelana kakuhle nomthi omnyama ngakumbi osetyenziselwa iikhabhathi zepaneli eziphakanyisiweyo kunye neecaseworks. Indlu yangasese yala maxesha enetanki efihliweyo inyuselwe ecaleni kwaye itafile enesetyhula igcwele embindini wegumbi lokuhlambela.
Cwangcisa kumanqwanqwa ajikeleziweyo anezibane ezibotshiweyo, isiphumo sonke sinika iqonga kunye nebhafu yokubhabha ejikelezwe kuyo, imvakalelo yokungakhathali. Oku kungabi natyala kuxhonywa ziifestile ezinkulu ezinamakhethini amhlophe cekeceke. Izinto zommandla we-luxe wanamhlanje obonakalayo kwi-architrave egobileyo ngaphezulu kwebhafu kunye nemida yeetayile ezimdaka ngebala, i-wall mosaic tile backwall kunye ne-chrome egqityiweyo yokuma itawuli ecaleni kwayo.
Itayile emnandi yegolide emnyama kunye negolide kuyo yonke i-backwall yeqonga eliphakanyisiweyo leebhafu kunye neendawo zokuhlambela kwaye liphelisa ngefestile enkulu yokungenisa ukukhanya kunye nembono evela ngaphandle. Indawo yokuhlamba inendawo yokuhlamba i-chrome egqityiweyo kwiindonga zayo zethayile yangaphantsi kunye nemvula ebekwe eluphahleni. Indawo yokuhlambela ikwabeka ibhentshi emdaka ngombala, ngelixa ibhafu emhlophe emile ngokungafaniyo ihleli ecaleni kwayo. Isitya sokuhlambela kwimiphezulu yeetafile ze-quartz esimnyama sithwala isibini se-boxy isitya sokuhlambela isitya esine-trio yokuxhoma iintsimbi zentsimbi ngaphezulu kwayo. Umgangatho weethayile ye-beige ugxilwe yimigca ye-beige erhabaxa.
Ithayile emnyama kunye negolide isetyenziselwa zonke iindonga zeli gumbi lokuhlambela langoku, kunye nomda wethayile kunye nomgangatho wombala omhlophe ongacacanga. Izixhobo ezigqityiweyo zodonga ezigqityiweyo zodonga zigubungela iindonga zeli gumbi lokuhlambela, ngelixa uhlobo lokuntywila lwenqanawa oluhleli phezu kwetafile yamatye e-quartz emnyama.
Uyilo lwangoku lokuhlambela olubonisa iphalethi enemibala. Udonga oluhlaza okwesibhakabhaka kunye negolide lwe-mosaic set wall lubeka umbala ococekileyo kule ndawo yanamhlanje yokuhlambela kwaye yahluke kakhulu ngesihlalo sokuhlala esicocekileyo, esine-fuchsia. Iithayile zomgangatho weemarble zeCalacatta zongeza ubume bomhlaba kwigumbi lokuhlambela langoku, ngelixa ibhafu emhlophe egudileyo, intloko yeshawa enkulu kunye nokukhanya kwesibhakabhaka kongeza kwi-vibe yayo yanamhlanje.
Ithayile emnyama emnyama, yesilivere kunye nomhlophe ihamba ngeenxa zonke kwiindonga zangasemva zale ndawo yokuhlambela yangoku kunye ne-countertop yelavatory. Itafile eyakhelweyo eyakhiwe, kwimarmore emhlophe emhlophe, ibaleka ukusuka kwisitya sokuhlambela esingagungqiyo, ukuya kwindlu yangasese yetanki efihliweyo, ukuya kwizakhiwo ezigqityiweyo chrome ezibekwe eludongeni kwindawo yokuhlamba. Imigangatho ikwisithayile esimnyama, esongeza kwimixholo ye-monochrome yegumbi, ngelixa ipaneli yokukhanya ekhanyayo enobuqili ngaphaya kwento engento ibonelela ngendalo engaphezulu.
Ukugqitywa okumhlophe konke kwendlu yangasese efihliweyo, i-bidet kunye ne-kabini-basin counter counter, kunye neendonga ezimhlophe kunye neshelufu eyakhiweyo kunye nebhafu inikwa umbala wombala we-quirky. Umbala wekristale kunye neglasi yeglasi exhonywe embindini wale ndawo yokuhlambela yanamhlanje yeyangoku kwaye ilungile. Inkqubo ye- Chandelier yangasese Imatshisi kakuhle kunye netayile emhlophe emfusa kunye nomhlophe evale indawo yokuhlambela eyakhelweyo, kunye nokugcoba emazantsi esipili esipheleleyo kwindawo yokulinganisa.
Uyilo lwala maxesha lokuhlambela lubonisa iindonga zamatye ze-Emperador ezimnyama ezihambelana netayile emhlophe engwevu yomgangatho kunye ne-countertop yamatye. I-countertop ye-vanity ifakwe kwisibuko esigcweleyo kwaye iqulethe indawo encinci yezibane ezantsi. Itafile encinci yekofu ejikeleziweyo enezinto ezenziwe ngamaplanga kunye ne-porcelain inika ithoni yomhlaba ngakumbi ehambelana nebhafu yangaphandle yesetyhula.
Eyona ndawo kugxilwe kuyo sisitayile saseJapan esimangalisayo ibhafu yokutyela ngaphandle. Icandelo elingaphandle linomgangatho ofanayo wethayile kodwa linethayile emnyama engwevu kwaye ligcinwe ngamatye amancinci kunye nezityalo ezincinci zokuhombisa.
Isikhumbuzo somfazi seminyaka emi-5
utshintsha njani igama xa utshatile
iinwele zegolide zomtshato
Ingxowa yesipho yeendwendwe zomtshato